About PHYO Computer Courses
PHYO Training Centre တွင်ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးနေသော သင်တန်းများ
"Office Essentials Course"
Computer ပညာရပ်များကို အခြေခံမှစတင်ပြီး ရုံးလုပ်ငန်းသုံး Computer နည်းစနစ်များကို ထပ်မံ လေ့လာလိုသူများ အတွက် ၊ ရုံးလုပ်ငန်းသုံး စာစီစာရိုက်ခြင်း အခြေခံသဘောတရားများ၊ စာရင်းဇယားရေးဆွဲခြင်းများ၊ Presentation ပြုလုပ်ခြင်းများ နှင့် အခြား လိုအပ်သည်များကို သင်ကြားပေးသည့်သင်တန်း
Computer Fundamental (Windows 7)
Typing (Myanmar & English)
ကွန်ပျူတာအခြေခံကို လေ့လာပြီး ရုံးလုပ်ငန်းသုံး နှင့် တစ်ကိုယ်ရည်သုံး Computer နည်းစနစ်များကို ထပ်ဆင့် လေ့လာနိုင်စေရန် လိုအပ်သည်များကို ဖြည့်စွက်သင်ကြားပေးသော Course ဖြစ်ပါသည်။
"DTP (Desktop Publishing Course)"
စာစီစာရိုက်လုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သော ဖိတ်စာ၊ လိပ်စာကဒ်၊ ဘောက်ချာ၊ ကြော်ငြာဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း၊ Logoရေးဆွဲခြင်းများကို တတ်မြောက်အောင် သင်ကြားပေးသော Course ဖြစ်ပါသည်။
ပြည်တွင်း ပြည်ပ လုပ်ငန်းခွင်များတွင် Graphic Designer များအဖြစ် အသက်မွေးလိုသူများ၊ Freelance များအဖြစ် လုပ်ကိုင်လိုသူများ၊ Design ရေးဆွဲခြင်းပညာရပ်များကို လေ့လာလိုသူများအတွက်
"Graphic Design Course (Local)"
Using Photoshop (Latest Version)
ဓာတ်ပုံများကို ပြုပြင်ခြင်း၊ ကြော်ငြာဒီဇိုင်းများ၊ Logoဒီဇိုင်းများ ဖန်တီးခြင်း effect များထည့်ခြင်း တို့ကို ကျွမ်းကျင် တတ်မြောက်အောင် သင်ကြားပေးသော course ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာအဆင့် တတ်မြောက်လိုသူများ နှင့် နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ် ကိုင်ဆောင် ရယူလိုသူများလည်း တွဲဖက် တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
"Graphic Design Course (International)"
ပြည်တွင်း ပြည်ပ ကုမ္ပဏီကြီးများတွင် Graphic Designer အဖြစ် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်လိုသူများ၊ Design ရေးဆွဲခြင်းကို စိတ်ပါဝင်စားသူများအတွက် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နိုင်ရုံသာမက သင်တန်းပြီးဆုံးပါက နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ကိုပါ တစ်ပါတည်း ရရှိနိုင်မည့် သင်တန်းဖြစ်ပါသည်။ ကျွမ်းကျင်သော နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရ Designer များကိုယ်တိုင် သင်ကြားပေးသည့် သင်တန်းလည်းဖြစ်ပါသည်။
စာရင်းအင်းပညာရပ်ဖြင့် အသက်မွေးမည့်သူများ၊ စာရင်းဇယားပိုင်းဆိုင်ရာ နှင့်ပတ်သက်၍ Microsoft Excel ကို Professional Level အဆင့်အထိ တတ်မြောက်ကျွမ်းကျင်ထားလိုသူများ၊ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု Excel ကျွမ်းကျင်လက်မှတ် ဖြေဆိုရယူလိုသူများအတွက်
"Advanced Excel in Office Business Course"
Complete Usage of Formula and Function
Lock the cells & files
လုပ်ငန်းခွင် ဝင်ရောက်လိုသူများနှင့် စာရင်းဇယားကို စိတ်ပါဝင်စားသူများ အတွက် Microsoft Excel ကို ပိုင်နိုင်စွာ အသုံးပြုတတ်စေရန် နိုင်ငံတကာ သင်ရိုးများ နှင့် အညီ တတ်မြောက်အောင် သင်ကြားပေးသော Course ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းပြီးဆုံးပါကလည်း နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ဖြေဆိုရယူနိုင်ပါသည်။
"Auto CAD (Basic-Intermediate)"
Basic Usage of AutoCAD Software
2D Drafting Drawing (Mechnical, Civil, Electrical, Piping)
Auto CAD Software ကို အခြေခံမှစ၍ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်အောင် command စုံလင်စွာဖြင့် နိုင်ငံတကာ သင်ရိုးများနှင့်အညီ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပြီး၊ နိုင်ငံတကာနှင့် ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းများတွင် Draft-man အဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင် နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာနှင့် ပြည်တွင်း ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်များ၊ Construction Company ကြီးများတွင် လစာကောင်းကောင်းဖြင့် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်လိုသူများ၊ 2D ,3D Design ရေးဆွဲခြင်းပညာရပ်များကို လေ့လာတတ်မြောက်လိုသူများအတွက် ပြည်တွင်းပြည်ပ အတွေ့အကြုံရှိ နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရ ဝါရင့် Designer များကိုယ်တိုင် သင်ကြားပေးသည့် သင်တန်းဖြစ်ပါသည်။
"Auto CAD (3D Architectural Rendering Course)"
Creating 2D to 3D Design
Auto Desk Institude Ren
AutoCAD Software ၏ အဆင့်မြင့်နည်းပညာများကို အသုံးပြုပြီး 3D အဆောက်အဦးများ၊ ပစ္စည်းများဖန်တီးခြင်း၊ သက်ဝင်လှပအောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ အလင်းအမှောင်ချိန်ညှိခြင်း၊ အိမ်တွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း များရေးဆွဲခြင်း၊ Render ပြုလုပ်ခြင်းများကို တတ်မြောက်အောင် သင်ကြားပေးပြီး နိုင်ငံတကာ လုပ်ငန်းခွင်များတွင် 3D Designer အဖြစ် အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
"AutoCAD (Advanced Level ) Course"
Advanced 2D Commands
Speciallized in (Civil, Mech:, Electrical) Drawing
Advanced Dimensioning Principal and Scale
3D Advanced Commands for Work
AutoCAD Software ကို အဆင့်မြင့် Advanced level အထိအသုံးပြုလိုသူများအတွက် လုပ်ငန်းခွင်အသုံးအနှုန်းများနှင့် ရေးဆွဲခြင်းများကို အထူးပြု ကြပ်မတ်သင်ကြားပေးသော သင်တန်းဖြစ်ပါသည်။ Auto CAD အခြေခံရှိပြီးသူများနှင့် AutoCAD Bacic-Intermediate Level သင်တန်းတတ်ရောက်ပြီးသူများ ဆက်လက်တတ်ရောက်နိုင်ပါသည်။ သင်တန်းတွင် Civil လုပ်ငန်းခွင်များမှ ပုံများ၊ Mechnical Drawing များ၊ Electrical Diagram များရေးဆွဲခြင်းကို အထူးပြုသင်ကြားလေ့လာကြရမည် ဖြစ်ပါသည်။
"Auto CAD International Certification Program"
Basic Usage of AutoCAD
2D Advanced Commands
International Drawing Skills
Auto CAD ကို အခြေခံမှစပြီး နိုင်ငံတကာလက်မှတ် ရရှိနိုင်သည်အထိ နိုင်ငံတကာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ နှင့်အညီ ပြီးပြည့်စုံစွာ သင်ကြားပေးသော သင်တန်းဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းတတ်ရောက် ပြီးပါက နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ကို တစ်ပါးတည်း ပိုင်ဆိုင်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
"ICDL-CAD Exam Preparation Course"
International 2D Drawing Scale
Using Attributes of Laver / Level
Add title block
Scale and Plotting
နိုင်ငံပေါင်း၁၅၀ကျော်က အသိအမှတ်ပြုသော ICDL-CAD လက်မှတ်ရရှိနိုင်သော စာမေးပွဲဖြေဆိုနိုင်ရန် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသော သင်တန်းဖြစ်ပါသည်။ Auto CAD ဖြင့် ပြည်တွင်း ပြည်ပတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုသူများ အတွက် မရှိမဖြစ် ရယူ ကိုင်ဆောင်ထားသင့်သော လက်မှတ်ဖြစ်ပြီး မိမိ၏ AutoCAD ကျွမ်းကျင်မှုကို အသိအမှတ်ပြုသော လက်မှတ်ရရှိမည့်သင်တန်း ဖြစ်ပါသည်။
Professional 3D Design များကို ဖန်တီးရေးဆွဲတတ်မြောက်လိုသူများ၊ Interior/Exterior Designer များအဖြစ် လစာကောင်းကောင်းရလိုသူများ၊ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းဖြင့် Services ပေးအသက်မွေးလိုသူများ၊ Modeling ပညာရပ်ကို နားလည်တတ်ကျွမ်းလိုသူများ၊ Animation ပြုလုပ်ဖန်တီးခြင်းကို တတ်မြောက်လိုသူများအတွက် သင်တန်းများ
"3Ds Max Course (Professional Level)"
3DMax ဖြင့် Modeling ဖန်တီးခြင်း ၊ Design ဆွဲခြင်းကို Project ကြီးများ ရေးဆွဲနိုင်သည်အထိ လေ့ကျင့်သင်ကြား ပေးပြီး၊ သင်တန်းပြီးဆုံးပါက လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း Professional အဖြစ်ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာနှင့် ပြည်တွင်းတွင် လစာကောင်းကောင်း ဖြင့် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်လိုသူများ တက်ရောက်ထားသင့်သော သင်တန်းဖြစ်ပါသည်။ ပည်တွင်းရှိ ဆောက်လုပ်ရေး Project ကြီးများ၊ အစိုးရ Project များအတွက် 3D Design များနှင့် Animation Projects များကို ရေးဆွဲပေးနေသည့် ဝါရင့်ဆရာ ကိုယ်တိုင်သင်ကြားပေးသည့် သင်တန်းဖြစ်ပါသည်။
"3Ds Max Course (Construction Animation)"
3DMax ဖြင့်ဖန်တီးထားသော Construction Model များကို သက်ဝင်လှုပ်ရှားအောင် Animation ပြုလုပ်ခြင်း၊ အဆောက်အဦးတည်ဆောက်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကို ပြသခြင်း၊ လူများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်များ ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ခြင်း ၊ Scanline, Mental Ray, V-ray တို့ကို အသုံးပြုပြီးူ ခေတ်မီ Animation များလျှင်မြန်စွာ ပြုလုပ်ခြင်းကို လေ့လာသင်ကြားရမည့် သင်တန်းဖြစ်ပါသည်။
"3Ds Max Professional Course with Animation"
3DMax ဖြင့် အဆောက်အဦးတစ်ခု၏ Modeling ဖန်တီးခြင်း၊ လှုပ်ရှားသက်ဝင်အောင် ဖန်တီးပြုလုပ်ခြင်း၊ Texture များဖန်တီးခြင်း၊ အလင်းအမှောင်ချိန်ညှိခြင်း၊ Video Effects များဖြင့် 3D Animation ဖန်တီးခြင်းကို သင်ကြားတတ်မြောက် နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ 3D Modeling with Animation Effect ဖန်တီးခြင်းကို စိတ်ပါဝင်စားသူ မည်သူမဆို တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
ပြည်တွင်း ပြည်ပလုပ်ငန်းခွင်များတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်လိုသူများအတွက် AutoCAD နှင့် တူ တတ်မြောက်ထားသင့်သည့် 2D/3D Design ရေးဆွဲခြင်းများအတွက်
"Revit Architecture Course"
Using Revit interface
Create Plan, Elev:, Section
နိုင်ငံတကာနှင့် ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းခွင်များတွင် Architect များအဖြစ်ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်လိုသူများအတွက် လွယ်ကူမြန်ဆန်သော Plan, Elevation, Section, 3D များရေးဆွဲခြင်းကို အခြေခံမှစပြီး ပြီးပြည့်စုံစွာ သင်ကြားပေးသော သင်တန်းဖြစ်ပါသည်။
Auto CAD အခြေခံရှိပြီးသူများနှင့် လုပ်ငန်းခွင် ဝင်ရောက်နေပြီးသောသူများ / ဝင်ရောက်လိုသူများ တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
လွတ်လပ်ပေါ့ပါး လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာ 3D Design တစ်ခုကို ဖန်တီးတတ်မြောက်လိုသူများအတွက်
"Google SketchUp Course"
Basic Geometry/Drawing Tools
3D Geometry Construction Tools
Interior/Exterior Virtual Creation
A Taste of Animations
Google Sketch Up ကို လေ့လာလိုသူများ 3D Design ရေးဆွဲခြင်းကို လေ့လာလိုသူများအတွက် Interior/Exterior Design ရေးဆွဲခြင်းများကို အခြေခံမှစတင်ကာ အဆင့်မြင့် Rendering ပြုလုပ်သည်အထိ သင်ကြားပေးသည့် Course ဖြစ်ပါသည်။ Engineering အခြေခံမရှိသူများလည်း တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
Digital နည်းပညာခေတ်ကြီးတွင် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူများ၊ Marketing ပညာရပ်ဖြင့် အသက်မွေးလိုသူများ၊ မိမိလုပ်ငန်းကို လူပိုမိုသိရှိစေလိုသူများ၊ အိမ်တွင်း စီးပွားရေးအဖြစ် Online ကိုအသုံးချလိုသူများအတွက်
"ICDL Digital Marketing Course"
1. Digital Marketing Concepts
a. Web Presence Options
b. Website Considerations
3. Social Media Setup
a. Social Media Platforms
a. Social Media Management Services
b. Marketing and Promotion Activities
c. Engagement, Lead Generation and Sales
c. Social Media Insights
d. E-mail Marketing and Online Advertising Analytics
၎င်းအပြင် အခန်းပေါင်း (၁၈) ခန်းကို သင်ကြားကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။
• Digital နည်းပညာနှင့် Marketing ပြုလုပ်ခြင်းကို စိတ်ပါဝင်စားသူများ
• International Approved Certificate ကို ရယူပိုင်ဆိုင်လိုသူများ
• Company များရှိ ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်ရေးတွင်လုပ်ကိုင်နေသူများ
• အလတ်၊ အလတ်တန်းစား လုပ်ငန်းရှင်များ
• မိမိတို့လက်ရှိ စီးပွားရေးကို ချဲ့ထွင်လိုပြီး လူသိများလိုသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ
• တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရပြီး Marketing ပညာရပ်ဖြင့် အသက်မွေးလိုသူများ
• နိုင်ငံတကာမှ Marketing နည်းပညာရပ်များကို လေ့လာလိုသူများ
• International Company များတွင် Professional တစ်ဦးအဖြစ် အလုပ်ဝင်ရောက်လိုသူများ
• Social Media များဖြစ်သော Facebook , Youtube , Vimeo , Instagram , Linkin တို့အပြင် Google Advertising Methods များကို သိရှိနားလည်လိုသူများ
For More Detail Click Here..
PHYO Training Centre.